Galaxy S20 နဲ့ပက်သက်ပြီး အတွေးများ - PX
Galaxy S20 နဲ့ပက်သက်ပြီး အတွေးများ
Galaxy S20 Series က Samsung Fan တွေ S10 Series ထက် ပိုကောင်းတဲ့ တိုးတက်မှုတွေမြင်ရဖို့ မျှော်လင့်ချက်ကြီးကြီးထားနေကြသလို 120Hz Display, ပိုကောင်းမယ့် SoC, ပိုကြီးမယ့် Battery, ပိုမြန်မယ့် Charging Speed စတာတွေ ပါလာဖို့ သေချာနေတဲ့ Flagship Series. ဒါပေမယ့် Fan တွေ Hype အဖြစ်ဆုံး Camera ပိုင်းက စိတ်ကျေနပ်ရလောက်တဲ့တိုးတက်မှုတွေ တကယ်ရော ချပြနိုင်မလားဆိုတာကိုတော့ ပွဲရက်နီးလာတာနဲ့အမျှ ကိုယ်တွေတော့ သံသယပိုဝင်လာမိတယ်။
ရိုးရိုး S20 နဲ့ စတာပေါ့။ 64MP ကို Main Sensor အဖြစ် မြင်ရမယ်ထင်ခဲ့ပေမယ့် မနှစ်ကထိ သုံးနေခဲ့တဲ့ 12MP ကို ပဲ သုံးလာဖို့များတယ်။ ဒါ့အပြင် S9 က စတဲ့ Dual Aperture ကိုပါ ဖြုတ်တော့မယ် သတင်းထွက်နေတယ်။ ဆိုတော့ Software Tuning ကလွဲရင် Hardware ပိုင်းတိုးတက်မှုကို မြင်ရဖို့မရှိတဲ့ အနေအထားပါ။
တကယ်ပြောင်းလဲသွားမှာက 64MP Sensor. DxO Mark မှာ ဦးဆောင်တဲ့ ဖုန်းအတော်များများဟာ Camera ပိုင်းအသာရခြင်းအဓိကအချက်ဟာ Main Camera ထက် Zoom Camera တွေကို အကောင်းဆုံးချပြနိုင်တာကြောင့်ဆို ပိုမှန်မယ်။ Samsung ကလည်း ဒီ Trend ကို လိုက်မယ့်အနေအထား။ ဒါပေမယ့် 64MP Sensor ဟာ Main Camera အဖြစ်သုံးဖို့ Samsung က ထုတ်ထားတဲ့ Sensor? So, why????
ပထမတစ်ချက်က Zoom များများကို Camera Size သေးသေးနဲ့ သုံးနိုင်ဖို့။ စျေးကွက်ထဲက Tele Camera အတော်များများဟာ 5MP ကို ၅ဆ အထိဆွဲနိုင်ပြီး အဲလိုသုံးဖို့ Periscope နည်းပညာကို သုံးကြရတယ်။ ရလဒ်က နေရာပိုယူပြီး Camera Size ပိုထူကုန်တာပဲ။ Samsung ကတော့ 64MP ကို အပြည့်အဝသုံးမှာမို့ Hybrid နဲ့ Digital Zoom အပိုင်းမှာ Quality ပိုကောင်းတဲ့ Image တွေ ရနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပုံရတယ်။
ဒီ 64MP ရဲ့ အသုံးတည့်မှုက Zoom တစ်ခုထဲမှာ ရပ်မသွားပါဘူး။ S20 Series ရဲ့ Main Selling Point တစ်ခုဖြစ်လာမယ့် 8K, 30fps ရိုက်ကူးမှုကိုလည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ဦးမှာ။ ဒီပမာဏဟာ လက်ရှိဖုန်းတွေပေါ်က 4K ထက် Resolution ၂ ဆနီးနီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ချက်တွေးစရာရှိတာက 8K နည်းပညာအတွက် ထင်သလောက် အဆင်သင့်မဖြစ်သေးတဲ့ ဒီဘက်ခေတ်မှာ ဒီ Feature က တကယ်ရော အသုံးတည့်မှာလား? ဒါမှမဟုတ် DXO ရဲ့ Video Score မှာ ထိပ်ဆုံးရောက်နိုင်ဖို့ Samsung ရဲ့ ရွှေ့ကွက်တစ်ခုဖြစ်လာမလားဆိုတာတော့ စောင့်ကြည့်ရမှာပါ။
S20 Series နဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်ပိုင်အမြင်အရ စိတ်တိုင်းမကျဆုံးအချက်ကိုပြောပါဆိုရင် S20 Ultra ရဲ့ Main Camera ကို လက်ညှိုးထိုးပါရစေ။ 108MP Sensor ကို Samsung မှာသုံးလာမယ်ကြားကတည်းက9in 1 Pixel Binning နဲ့ပတ်သက်ပြီး ခန့်မှန်းခဲ့တဲ့ထင်ကြေးက ခုတော့ အတည်ဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရမယ်။
တကယ်တော့ 108MP သုံးလာမယ့် Samsung ကို ခုထက်ပိုပြီး မျှော်လင့်မိခဲ့တာပါ။ Mi CC9 Pro မှာ သုံးခဲ့သလို 27MP နဲ့ Image Detail ပိုင်းမှာ ပြိုင်ဘက်တွေကို စိန်ခေါ်အလဲထိုးနိုင်မယ့် Camera မျိုး မျှော်လင့်ခဲ့ပေမယ့် Samsung ကတော့ ဒီ Sensor ကို 12MP အဖြစ်ပဲ အသုံးချမယ့် အတည်ပြုသတင်းတွေထွက်လာပါပြီ။ Pixel Size ကြီးတဲ့ Sensor တွေဟာ Low Light Photography အတွက် အသုံးတည့်တာလက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သာမန်အချိန်အတော်များများမှာ 12MP Photo တွေဟာ ပြိုင်ဘက်တွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ ရလဒ်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ဖို့ဆိုတာ ထင်သလောက်မလွယ်တော့ပါဘူး။
နောက်ပြီး Low Light ကောင်းစေချင်ရင် ဒီဘက်ခေတ်မှာ Night Mode လို Software Support ကောင်းအောင် ပိုလုပ်သင့်တယ်လို့ မြင်တယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ 108MP Sensor ဟာ အသုံးချတတ်ရင် 8K Video မဟုတ်တောင် 6K Video နဲ့ Digital Zoom အပိုင်းတွေကို Zoom Lens ထပ်ထည့်စရာမလိုပဲ စွမ်းနိုင်တဲ့ Sensor မျိုး။ ဒါကြောင့် Samsung ဟာ သူတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းကို အကောင်းဆုံးအသုံးမချနိုင်ခဲ့ဘူးလို့ မြင်မိလာတယ်။
“မင်းက Spec လေးကြည့်ရုံနဲ့ ဆရာကြီးလုပ်တယ်” ဘာညာပြောချင် ပြောနိုင်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း Smartphone Camera, Sensor, Feature တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Article တွေ အများကြီးရေးခဲ့၊ လေ့လာနေဆဲလူတစ်ယောက်အနေနဲ့ Galaxy S20 Series ရဲ့ Camera Arrangement တွေဟာ “Samsung အနေနဲ့ ဒီထက်ပိုပြီး လုပ်နိုင်သင့်ရဲ့နဲ့ကွာ” ဆိုတဲ့ အတွေးနဲ့ သံသယတွေ ဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း S20 Series ဟာ Premium Flagship Level မှာ Balanced အဖြစ်ဆုံး Android Phone တွေအဖြစ် ရပ်တည်ဦးမယ်ဆိုတာကို အကြွင်းမရှိယုံတယ်။ ဒါပေမယ့် Camera ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်တိုင်းမကျနိုင်သေးတာကတော့ နံပါတ် ၁ Android Brand တစ်ခုအပေါ် အကြီးကြီးတွေ မျှော်လင့်ထားတဲ့ Enthusiast တစ်ယောက်ရဲ့ လောဘကြောင့်ဆို ပိုမှန်ပါလိမ့်မယ်။
မိုဘိုင်းဂိမ်းအဖြစ် ထွက်လာဦးမယ့် Crash Bandicoot စီးရီး